Rosia: Resahina amin’ny aterineto ny tetikasa momba ny lalam-pifidianana vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2010 17:20 GMT
Tamin'ny volana lasa, ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana Rosiana, mpanara-maso fifidianana,”Golos” (A Voice) dia namoaka [RUS] safidy iray amin'ny ho lalam-pifidianana tamin'ny aterineto , izay heverina hitondra mankamin'ny fifidianana malalaka, marina, ary mangaraharaha any Rosia. Iray amin'ireo ohatra vitsivitsy vaovao amin'ireo vakiraoka-na volavolan-dalàna navoitra ampahibemaso tamin'ny aterineto ity .
Nandray kohin-dàlana ratsy ny fahalalahana sy ny fangaraharan'ireo fifidianana tany Rosia niaraka tamin'ny fahalanian'ny Filoham-pirenena faharoan'i Rosia Vladimir Putin. Ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2000 sy ny fifidianana ny Duma (parlemanta) tamin'ny taona 1999 no fifidianana farany neken'ny Organization for Security and Co-Operation any Eoropa (OSCE) [EN] ho “mifanaraka tsara amin'ireo fitsipika ara-demokratika ekena iraisam-pirenena.” Tsy nahavita ny fepetra notakian'ireo fifidianana ara-demokratikan'ny OSCE sy ny Kaonsilin'i Eraopa [Council of Europe] ireo fifidianana rehetra taty Niova ireo fomba fanao rehetra amin'ny fifidianana sy ny lalàna mifehy izany izay nambara ho eo manana endrika “demokrasia notarihan-dàlana ” [EN] ary taty aoriana ho “demokrasia manana ny fiandrianany” mba hisakanan-dàlana ny mpanohitra sy hamerana ny zon'ireo mpifidy. Tafiditra ao anatin'ireo fanovàna ny lalàna, ny fanalàna ireo fifidianana governora tamin'ireo faritra Rosiana, fampiakarana ny fetra hidirana ao amin'ny Duma avy amin'ny 5 ho 7 isan-jaton'ny vato ho an'ireo antoko politika, fanenjanana ny zavatra takiana amin'ireo antoko politika sns. Vokany, nitontongana ny isan'ireo antoko politika niala avy amin'ny ampolony ka lasa fito [RUS] sisa (ary efatra monja no voasolo tenaao amin'ny Duma ).
Tamin'ny faran'ny taona 2008, nifamotoana ireo vondrona manam-pahaizana 31 tsy miankina momba ny fifidianana, ireo mafana fo mpiaro zon'olombelona, ireo mpandalina ara-politika sy ireo mpanao gazety notarihin'i Arkadiy Lyubarev mba hanolotra volavolan-drafitra ara-pifidianana hasolo ny amin'izao fotoana izao. Nanomboka resaka an-databatra boribory nifanesy tany Moscou, Saint-Petersburg, Samara, Kazan sy tanàna maro hafa, i “Golos” rehefa hitany fa samy tsy misy liana amin'ny hanovana ny rafitra, na ny fanjakana na ireo antoko politika amin'izao fotoana. Antontan-taratasy lavabe [RUS] misy pejy 141 izay naseho tamin'ny 09 Jona 2010 no vokatry ny asan'izy ireo .
Ny fifanakalozan-dresaka tsy dia mafana loatra mikasika io resaka io ao anatin'ny aterineto dia sady ahitàna endri-pampielezan-kevitra manokana sy fanakianana mikendry hanatsara zavatra. Namaritra ilay antontan-taratasy amin'ny fomba mahatsikaiky i Denis Dvornikov, sekretera mpanantanteraky ny Civic Control, Fikambanana tsy miankina (ONG) astroturf mpanohana ny Kremlin [RUS] ka miantso azy io ho “antontan-taratasy poakaty sy mpanao kobaka am-bava… izay natao hamelomana ireo teknolojista ara-politika matin-kanoanana.”
Nanoratra mikasika ny nofinofy tsy ho tò amin'ilay volavolan-dalàna [RUS] i Dmitri Sapegin, teknolojista ara-politika iray
Na izany aza, nanakiana [RUS] ilay antontan-kevitra ho avy amin'ny fijery federalisma V_Martynov mpampiasa Livejournal: teritery ihany ny fahafaha-mihetsiky ny faritra hanendry ny rafitra azy ireo manokana faritan'ilay volavolan-dalàm-pifidianana.